Xuska 10aad ee Maalinta Calanka Itoobiya oo lagu qabtay magaalada Jig-jiga. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Xuska 10aad ee Maalinta Calanka Itoobiya oo lagu qabtay magaalada Jig-jiga.
Jig-Jiga(FMN)-Munaasabada xuska 10aad ee maalinta calanka ee JFI ayaa aroornimadii hore ee maanta si heer sare ah uga qabsoonta garoonka kubbada cagta ee magaalada jig-jiga. Xuskan oo lagu magacaabo(Sindhiq Alemaa)ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto looguna dabaal dego qiimaha iyo jiritaanka calanka oo ah mid kamid ah astaamaha qaranka,islamarkaana muujinaya wada jirka iyo nabad kuwada noolaansha shucuubaha iyo qowmiyadaha kala duduwan ee dalkaasi ku dhaqan.
Munaasabada oo ay kasoo qeyb-galeen madaxda ugu sareysa maamulka DDSI,Shaqaalaha dawlada,Ciidamada difaaca Qaran,Ciidanka Gaarka ah ee Deegaanka,Culumaa’udiin,Haween,Dhalinyaro,Kooxaha fanka ee Deegaanka iyo qeybaha kala duduwan ee bulshada ku dhaqan magaalada jig-jiga ayaa waxaa ugu horeyn khudbad ka jeediyay Madaxweynaha DDSI Mudane;Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay qiimaha calanku uleeyahay dadweynaha Itoobiya. Sidoo kale xubno badan oo ka mid ah marti sharafkii madasha ku sugnayd ayaa soo jeediyay hadalo qiimo badan oo ku aadan ahmiyada ay munaasabadi xambaarsantahay.
Intaa kadib ayuu Madaxweynaha DDSI Mudane;Cabdi Maxamuud Cumar madasha ka taagay ama sudhay calanka qaranka iyo Kan deegaankaba.Dabaal degyo iyo xaflado kale oo tan lamid ah ayaa ka dhacay guud ahaanba dalka iyo gaar ahaana magaalooyinka iyo degmooyinka uu ka koobanyahay Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Ugu danbayntiina munaasabada ayaa kusoo idlaatay jawi nabadeed oo farxadi ku dheehantahay,halkaas oo qof walba uu ruxay korna usitay calanka qaranka iyo kan deegaankaba.
Previous Previous post: Akhriso Magacyada Xubnaha Gur-madka Qaran ee Qaraxii Muqdisho.
Next Next post: Guddiga Doorashooyinka Dalka Kenya oo Fuliyay Qaar kamid ah dalabyadii Mucaaradka NASA.